Ulawulo lwa Manzi
Amashumi asixhenxe (70%) omhlaba, ugqunywe ngamanzi. Amashumi alithoba nesixhenxe (97%) yawo onke amanzi, ngamanzi anetyuwa.
Ngaphantsi kwesithathu sepesenti (3%) yamanzi amatsha acocekileyo, kuphela ngumlinganiselo we 0.3% ngamanzi angaphezulu afikeleleka lula kuthi ukuze siwasele okanye siwasebenzise kwimveliso yokutya nako konke esikuvelisayo ukuze siphile. Okuseleyo:
69% - Akhenkcezisiweyo
0.7% - Ase moyeni
30% - Ngaphantsi
Amanzi anqabile. Amanzi awayekhona apha emhlabeni kwizigidi zeminyaka ngaphambili asekhona nangoku kwaye awazokwanda. Okufuneka kutshintshe yindlela esiwasebenzisa ngayo ukuze sihlale siphila. Kufuneka sifunde ukuba singadlali ngawo. Kumanzi amatsha acocekileyo esiwasebenzisayo:
70% isetyenziselwa ezolimo
20% isetyenziselwa imizi mveliso kunye
10% namakhaya nokusela nokupheka
Ukuze sivelise amanzi kufuneka sihlale sizama okutsha ukufumana iindlela zokusebenzisa amanzi amancinci kwaye singadlali ngamanzi kwimveliso yokutya kwethu.
Ukuvelisa ikilogram yenyama yenkomo kuthatha 15 000 yelitha zamanzi okanye 15 m³ zamanzi
Ukuvelisa ikilogram yenkozo ze rayisi kuthatha 3 500 yelitha okanye 3.5 m³ zamanzi.
Sinethamsanqa ke kuba kwezolimo zale mihla, ukuzama indlela ezithile zokwenza izinto kusizisele indlela yokuqwalasela umlinganiselo wamanzi emhlabeni. Oku kwenza kubelula ukunkcenkceshela ngendlela zokunkcenkceshela ezintsha kwaye ezilula ezingenzi ilahleko yamani ezifana ne driphu yangaphezulu neyanga phantsi emhlabeni. Kodwa ke kusenjalo, ngapha kwama 60% wamanzi asetyenziselwa ukunkcenkceshelwa kwezolimo kudlalwa ngawo kwizinto ezingabhadlanga. Ngokuthi kuhlolwe ngempumelelo amanzi ashiyekileyo kwingcambu zezityalo ezohlukileyo, izakunceda ukuthintela ilahleko.
Ukukhongozela Amanzi Emvula Eluphahleni
Ukukhongozela amanzi emvula (‘rainwater harvesting’) awa kuphahla lwendlu ukuze asetyenziswe phakathi nekhaya okanye egadini; sisenzo esenziwa...more
Ukubaluleka Koku Khongozelwa Kwamanzi Emvula Kunye Noku Londolwaza Kwe Ndalo
Ukungakhathalelwa komhlaba kunye nokugecwa kwa mahlathi kukhokelela kukhukuliseko lomhlaba kunye nokuhla komgangatho womhlaba....more
Unkcenkceshelo yindlela yokugalela amanzi emhlabeni ekutyawe kuwo izityalo. La manzi angahamba ngemibhobho, imingxunya okanye imisele, ukulungiselela ukunkcenkceshela...more
Kubalulekile ukubazu ubumanzi bomhlaba ukuze umlimi ankcenkceshele ngexesha elifanelekileyo. Nokuqinisekisa ukuba kukho amanzi oneleyo emhlabeni ukuze iingcambu...more
Iindlela Zokukhongozela Amanzi Emvula
Zintathu iindlela zokukhongozela amanzi emvula. iMacro-catchment kukuqokelelwa kwamanzi emvula ngaphandle efama....more
Imithombo yaManzi, Ukugcinwa, Ukutsalwa Kwamanzi kunye noku Mpompa
Onke amanzi afikelela ngaphezulu emhlabeni ngendlela ezohlukileyo, ezifana nokhephu, imvula, amaqhwa okanye inkungu. Mibini eyona mithombo yamanzi esiyisebenzisayo kwezolimo...more
Kukuthini Ukuvunwa Kwamanzi Emvula?
Ukuvunwa kwamanzi emvula kuhambisa amanzi emvula asuka kuphahla lwezindlu okanye lwezakhiwo, okanye ahamba emhlabeni ngemibhobho/gutters aze aye kugcinwa kwitanki lamanzi....more